XEERARKA DARYEELKA EE CANAB EE GUGA IYO XAGAAGA - CANAB
Noocyada daryeelka ee canab ilaa xilliga guga
Canab jacayl iyo koraan badan. Laakiin si aad u hesho miro wanaagsan oo wanaagsan, si loo ogaado sumadaha iyo "waxyaabaha muhiimka ah ee noocyada kala duwan ee geedkan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in ay tahay daryeelka saxda ah iyo taxadar leh.
Aynu ogaanno sifooyinka daryeelka canabka ah xilliyada kala duwan ee sanadka.
Daryeelka canab quraanka dadka waaweyn ka dib jiilaalka
Sidaas, aynu ka bilawno bilowgii xilli-ciyaareedka, taas oo ah, laga bilaabo guga. Canabkeennu wuxuu ka badan yahay, haddana waa lagama maarmaan in loo diyaariyo kulaylka iyo muddada koritaanka.
Ka qaado hoyga
Qodobka ugu horeeya ee la xalliyo waa sii deynta ee ka yimaada hoyga jiilaalka. Tani waa in la sameeyaa marka heerkulka hawada ee ugu dambeyn la dhiso. Laga soo bilaabo waayo-aragnimo, waad tilmaani kartaa in badan oo woqooyi waa beerta canabka ah, ka dibna ilaalinta ayaa laga saaraa.
Koonfurta waddanka, waxaad bilaabi kartaa bilowga Abriil, cimilada diiran, bilowga Maajo wuxuu noqon doonaa mid ku habboon, waqooyiga waa inaad sugto illaa dhammaadka bisha May - bilowga Juun. Laakiin ilaalinta muddada dheer ee duurka waxay dhaawici kartaa.
Sidaa darteed, waxaa ugu wanaagsan in laga saaro ilaalinta jiilaalka marka bilawga kulaylka, qalalan iyo hawada canabkiinna, ka dibna mar dambe dabool.
Ma taqaanaa? Canab waxaa lagu qadarin jiray oo keliya Giriigta, laakiin sidoo kale awoowayaasheenna Slav. Gudaha Slavic, godadnimada bani'aadamnimada Lada (ama Alive) ayaa joogta, iyada oo haysata tufaax iyo geed canab ah oo gacmaheeda ah.
Qaybta soo bandhigida canabka waa sidan soo socota:
Kaynta waa in laga sii daayo hoyga ka hor inta aaney bilaabmin heerkulka sare, markaa qoyaanku ma uruurin karo waxna ma sameysmin.
Iyada oo furan goor dambe waxaa jira khatar ah in la soo bandhigo kelyaha iyo go'yaasha, taas oo markaa la waayo.
Iyadoo khatar sare ah ee hoyga habeenkii habeenkii laga saaro maalintii, iyo mar kale habeenkii.
Buundada waa in la siiyaa helitaanka hawada, si dhirta loo isticmaalo loona adkeeyo.
Badbaadada waxaa laga saari karaa oo keliya kadib marka caleemaha cagaaran ay soo baxaan oo khatarta xajmiga heerkulka guga ayaa soo maray.
Ogow waxa ugu muhiimsan ee ku saabsan noocyada caleemaha sida Romeo, Alpha, Zest, Rusbol, Muddo badan oo la sugayay, Feejignaan, Qoryooley, Jilicsan, Taas, Yasya, Furor, Raspberry Super, Julian.
Laakiin waa in la xusuustaa in khatarta ugu weyn ee dhibcaha heerkulka habeenku ay tahay kelyaha sii kordhaya. Haddii indhaha ay awood u leeyihiin inay u gudbaan dhaxan ilaa -3-4 ° S, ka dibna burooyinkooda bilaabay koritaankooda waxay u dhintaan -1 ° C.
Sidaa darteed, habeenkii, hubi inaad ku daboosho canab iyada oo aan la isticmaalin wax aan la taaban karin ama lapnik. Guryaha noocan oo kale ah waxay ka ilaalin doonaan dhirta iftiinka (illaa -4 ° C) mana ka hor-tagi doonto dhulka in ay ka takhalusaan qoyaan xad-dhaaf ah.
Waa muhiim! Filimada Polyethylene ee hoyga guga ma ku haboon yahay.
Haddii ay tahay mid u qalantaa si dabiici ah u kululaynta ciidda ka dib xilliga qaboobaha ee beertaada waa adiga. Waxaad dabooli kartaa filim beerto. Laakiin waxaa haboon in aad xusuusatid in aadan awoodin inaad ku hayso kulaylka joogtada ah ee beertaada, sababtoo ah farqiga u dhaxeeya heerkulka gudaha iyo dibedda aqalka dhirta lagu koriyo.
Haddii guga aad haysato biyo badan oo biyo ah, waa inaad ka taxadartaa qoyaanka qoyaanka xad dhaafka ah. Si arrintan loo sameeyo, qodo jarjar meel fog oo ah 0.7-1 mitir baadiyaha labada dhinacba. Wareegga xayndaabku waa laba xabbadood oo xayndaab ah, oo qoto dheer ah 0.3-0.4 mitir.
Dhulku waa in lagu qoraa geedka. Sidan oo kale, waxaad heli doontaa sariiro sariiro leh oo dheeri ah, kaas oo biyo badani ay ku socon doonaan jihada saxda ah. Top, waxaad weli ku rusheyn kartaa mulchin organic; habkan waxaad heli doontaa mid kale oo dheeraad ah oo dheeraad ah - kuleylka si dhakhso ah ciidda guga.
Baahida labaad waa kormeer muuqaal ah oo duurka si loo ogaado dhibaatooyinka.
Ka dib marka la barbardhigo, dhibaatooyinka qaarkood waxay ku dhici karaan warshadda - way ku dhaawacmi kartaa dhaxan daran, geedka canabka ahna waxaa laga yaabaa inuu engegay ama uu caaryo. Dhamaan arrimahan waxay u baahan yihiin in si dhakhso ah loo ogaado iyo tallaabooyinka la qaaday si looga fogaado dhibaatooyinka mustaqbalka iyo khasaaraha dalagga.
Indhaha ayaa ku dhiman kara dhaxan daran iyo hoy ku filan, ama haddii ay dhacdo dhaxan guga lama filaan ah.
Si ay u noocyo canab ah u qabow u dhaxeeya waxaa ka mid ah "Harold", "Valiant", "Romeo".
Qiyaasta dhaawaca waxaa lagu go'aamiyaa biqilka xulashada geedka canabka ah. Marka la eego natiijooyinka jeeggaas, tirada godadka ka haray inta lagu jiro xayiraadda ayaa la go'aamiyaa.
Geedka canjeeraha la qalajiyey ama la qalajiyey waa in si wanaagsan loo jajabiyaa si uu u keydiyo geedkii oo dhan. Dhamaan meelaha dhaawaca iyo nabarrada waa in marka hore la daaweeyo hydrogen peroxide, ka dibna daboolay beerta beerta.
Waa muhiim! Waraabinta iyo bacarimiso dhirta burbursan waa in la yareeyo laba ilaa saddex jeer.
Marka la dhammeeyo kormeerka, canabkiinna waa in lagu daaweeyaa xal of copper sulfate - tani waxay u adeegi doontaa si looga ilaaliyo dhaxan degdeg ah iyo muuqaalka cudurada qaarkood, sida xagta oo budada ah iyo kallana cawl.
Canabku waxay midho u qaadaan oo kaliya on geedka canabka ah, sidaas darteed manjooyin joogto ah waa waajib. Intaa waxaa dheer, waxay joojinaysaa sida astaan ​​ah sida oohin of canab - qashinka casiir ah ee meelaha gooyo ama waxyeello.
Adiga ma dabooli kartid duurka illaa 90%. Waxba ma yeelayso iyaga oo dhan, laakiin lid ku ah, waxay dib udhisaysaa oo siin doontaa awood koritaan lagu guuleysto.
Gooyo caleemo sannadle ah ayaa lagu sameeyaa "eber" sidaa daraadeed ma jirto xadhig.
Isticmaal basbeel aad u fiiqan, marka la gooyo, ku adkee xajinta geedka canabka ah si loo saaro.
Si aad uga saarto caleemaha qarxan ee qarada weyn, isticmaal beer beerta fiiqan.
Ka dhig gooyaa si adag googo jilicsan, gooyuhu waa inuu noqdo mid yaryar, siman iyo xitaa intii suurtagal ah.
Gooyo waxaa laga sameeyaa gudaha gudaha geedka canabka ah - nabarrada ayaa si wanaagsan u bogsanaya meelahaas.
Waa in la xasuusto hannaanka fudud ee manjooyin - dhumucdiisuna waxay ka badan tahay boomka, muddo dheer waa la jaraa. Caleemaha yaryar waxaa la jaraa dherer aad u yar. Geedka canabka ah waa la jaraa 10-11.
Baro wax badan oo ku saabsan xeerarka soo geedka canjaga guga, iyo sidoo kale xagaaga iyo dayrta.
Kadib markaad jarjaraysid, waa lagama maarmaan in lagu daaweeyo hydrogen peroxide oo dabooli kara garoonka beerta ama casaanka cas. Tani waxay ka ilaalin doontaa dhirta laga qaado infekshanka by caaryo ama fungi.
Si aad u fuliso manjooyin waa in aan ujeeddo lahayn, iyo sameynta baadiyaha saxda ah.
Ma taqaanaa? Dunida waxaa jira in ka badan 10 kun canab. Tusaale ahaan, waxaa jira ilaa 4 kun oo baradho ah.
Si aad tan u samayso, xasuuso:
Sannad kowaad waxay ku koraan hal canab ah - xoog iyo awood leh, waxay u adeegi doontaa sidii garab oo jilicsan oo da 'yar.
Sannadka soo socda, saddex geed oo cusub ayaa laga soo qaaday gacanta ugu weyn ee dhexdhexaad ah oo ah 80 cm. Sidaas darteed, dhererka jeexjeexyada noocaan ahi waa inuusan ka badnayn 80 cm, kuwaasi waxay horey u noqonayaan gacmo-qabsi, waxayna ku jirtaa iyaga oo aad u baahan tahay si aad u sii wadato geed canab ah oo cusub.
Laga soo bilaabo sanadkii saddexaad waxaan bilaabi in ay si firfircoon u sameeyaan baadiyaha. Ka saar dhammaan kelyaha garbaha iyo dhammaan laakiin mid ka mid ah kuwa ugu xooggan - on gacmaha. Tani waa qalfoofka baadiyaha.
Sannadaha soo socda, waxay weli ku xiran tahay oo kaliya in la soo saaro caleemo cusub oo ka samee baadiyaha aad rabto.
Marka la sameynayo laba nooc oo la isticmaalay:
Isku toosinta caadiga ah - loo isticmaalo noocyo iyo goobo aan u baahnayn canab. Waxaa la sameeyaa iyada oo la sameeyo hal shtambac awood leh iyo gacmo dhawr ah oo ay canabku midho u dhali doonaan. A stem waxaa abuuray by lakabidda 1-2 indhaha ee guga ugu horeysay ee hal jir wanaagsan. Inta ka hartay qashinka. Sannadkii labaad, gudniinka ayaa mar kale la sameeyaa 1-2 ilood oo mar labaad oo dhanba waa la saaraa. Sannadka saddexaad, asaasiga soo baxay ayaa la gooyaa qiyaasta loo baahan yahay, iyo laba ka mid ah canabkiinna cusub ayaa laga tagay (kuwani waa gacmo-marin dambe), intiisa kale waa la jaraa. Hawlaha dheeraadka ah ayaa la samayn doonaa gacmahaan - way yar yihiin sida waafaqsan shuruudaha noocyo gaar ah, iyo caleemaha dhirta miraha ah ayaa lagu sameeyaa iyaga.
Isku xirxir la'aanta - waxaa loo isticmaalaa daboolida canabka. Faseex lama soo koobi doono, caleemaha oo dhan way isku laaban yihiin, daboolaana jiilaalka. Guga gebi ahaan caleemaha ayaa la gooyey. Tani waxaa lagu soo celiyaa saddex sano.
Cudurrada iyo daaweynta cayayaanka
Kadib markaad ka saarto daboolka iyo gooyska dhirta waa in laga ilaaliyaa cudurrada suurtagalka ah iyo cayayaanka.
Samee dhowr marxaladood:
Daaweynta kowaad waxay tahay in la ciribtiro buufinta ka dib furitaanka geedka canabka ah ee sulfate (300-500 g 10 litir oo biyo ah).
Bararka, muujinta kelyaha - "Aktellik" (ama "Bi58 cusub") iyo "Poliram". Waxaa la fuliyaa, haddii baadiyaha uu jirraday xilli ciyaareedkii hore.
Daaweynta saddexaad - dhammaadka Abriil, 3-5 caleemo run ah - "Chorus" (12 g halkii 10 litir oo biyo ah) ama "Topaz" iyo "Bi58 cusub."
Faafinta dheeraad ah waxaa lagu fuliyaa ka hor ubax, ka dibna - leh bilawga ah fruiting.
Soo ogow waxa iyo sida loo buufiyo canabkiisa xilliga gu'ga ee cudurada, mukhadaraadka loo isticmaalo beerta canabka ah, sida loola macaamilo cayayaanka canab, iyo waxa la sameeyo haddii ay u muuqdaan canab: macaanka pruritus, caanaha, alternariosis, chlorosis.
Canab dharka udugga ugu sareeya ee guga
Wixii horumarin buuxda iyo koritaanka wanaagsan ee geedkan, ayaa loo baahan yahay raad raaco badan iyo macdano kala duwan.
Marka lagu daro nitrogen-ka caadiga ah, fosfooraska iyo potassium, waxaad u baahan tahay inaad ku darto:
copper - waxay kordhisaa adkeynta xaaladaha cimilada xun;
boron - wuxuu kordhiyaa sonkorta sonkorta ee berry, xawaaraha dhaqso;
Zinc - wuxuu kordhiyaa wax-soosaarka.
U hubso inaad ku darto humus - waxay hagaajineysaa dhismaha carrada, waxay kordhisaa suunka hawada iyo biyaha.
Bacriminta waxaa lagu fuliyaa dhowr marxaladood.
Ka hor inta aan la heyn hoyga, canabku waa la waraabiyaa xalka superphosphate (20 g / baadiyaha), cusbada (10 g / baadiyaha), cusbo potash (5 g / baadiyaha).
Qiyaasta isku midka ah ee bacriminta waxaa lagu dhaqmaa ka hor ubax.
Ka dib markii ubax iyo ka hor bilaabashada fruiting, waxaad u baahan tahay inaad sameyso fosfooraska iyo potassium (20 g iyo 5 g halkii baadiyaha, siday u kala horreeyaan).
Ka hor inta jiilaalka, kaliya potassium ayaa lagu daray.
Baro sida loo cuno canabta guga iyo dayrta.
Xeerarka abuurista iyo waraabinta
Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee beerashada guga - ilaalinta qoyaanka iyo jaridda haramaha.
Uma baahnid inaad bilowdo ka hor inta aadan ka saarin ilaalinta canab. Sida ugu dhakhsaha badan dhulku wuu engegaa, way ka yarayn kartaa daboolka qoyaanka.
Later, ciidda u baahan doontaa in la dabciyo ugu yaraan 5 jeer muddada koritaanka firfircoon ee geedka canabka ah. Loosinta waxaa lagu sameeyaa qoto dheer oo ah 8-10 cm iyada oo la kala saaro cawska si siman.
Si looga hortago cimilada dusha sariiraha, wareegyada pristvolny waa in lagu daboolaa mulchin organic ah. Waxay kaloo noqon doontaa bacrimin dheeraad ah oo canab ah.
Canab - warshad abaarta u adkaysata iyo la'aanta qoyaanka waxay u dulqaadanaysaa xasilooni. Sababtoo ah guga ma jirto baahi gaar ah oo loogu waraabiyo waraabinta. Ka dib oo dhan, qoyaanka dhulka iyo sidaas la'aanta. Oo maalinnimadana waa baabba '.
Waa kuwan tilmaamo fudud oo loogu talagalay waraabinta beerta canabka ah:
Waa in la waraabiyo oo kaliya marka ay dhacdo cimilada kulul oo aan ka badnayn 7-10 maalmood oo kasta.
Waraabinta waxaa lagu sameeyaa haanta qashin qubka ama godadka gaarka ah.
Isticmaal biyo diirran oo diirran.
Waraabinta ugu muhiimsan waxay dhacdaa xilliga ubaxyada iyo berry ay u bislaadaan. Biyaha waraabtu waa inay noqdaan kuwo hufan.
Maraq iyo beeritaanka canab yar yar
Guga ayaa imanaya xilliga beertayda canabka ah. Ama waxaad ku beeri kartaa seedling on stem hore loo diyaariyey.
Shuruudaha iyo qawaaniinta degitaanka
Canab Plant loo baahan yahay marka ciidda u dillaacdo iyo hanjabaadda dhaxan baaskiil. Heerkulka ciidda lagu taliyey wuxuu ka badan yahay 15 ° C, heerkulka hawadu wuxuu ka sareeyaa 10 ° C.
Si aad u soo degto, dooro meel qorrax leh oo buur ah, oo dooro koonfurta.
Waa muhiim! Dhulalka qoyaanka, dhulka hoose, jilifka woqooyiga ahi kuma habboonayn koritaanka.
Hadda waa wakhti aad ku sameyso dalool. Wixii canab, waa inay ahaataa mid aad u weyn - 80x80x80 cm Ceelkaas oo kale, baadiyaha waxay dareemi doonaan wanaag iyo horumar. Qeybta hoose ee godta, ku dar dhagxan la jajabiyey ee biyaha iyo bacriminta, 4-5 baaldiyo ee humus ama compost, 0.5 kg of nitroammofosca iyo ash kasta.
Dhamaan oo dhan isku dar si aad dhulka ugu buuxisid heer 20 cm oo dhinaca sare ah. Biyaha carrada leh biyo iyo meel yaryar oo leh burooyinkeeda waqooyiga, si tartiib ah u faafidda xididada dhammaan jihooyinka. Ku hay meel sare oo madaxa ah, ku shub dhulka, laakiin ha ku dhufan.
Baro sharciyada beeri cana ah xilliga Dayrta oo la socdo, guntooda iyo geedka siddeed guga.
Waraabi jirida xiga ee 2-2.5 m.
Sababta waxay u baahan tahay badan oo qoyaan, sidaas darteed si taxadar leh ula soco xaalada carrada iyo biyaha marka qalalan.
Sida loo beero canab
Talaalku wuxuu hagaajinayaa caabbinta canugga ee cudurada iyo xaaladaha aan fiicnayn. Caadi ahaan jeexjeexa iyo noocyada dabiiciga ah si ay u helaan qaraabo xasiloon oo adag.
Qaliinka ugu horeeya wuxuu noqon doonaa gooyn goynta loo yaqaan "grafting". Waxaa la sameeyey dayrta, ka dib goosashada, laakiin ka hor bilawga ah ee dhaxan (sida caadiga ah October-November). Chubuks 9-12 cm dheer oo leh laba ama saddex indhaha laga gooyay baadiyaha la doortay. Dooro caarada caafimaad leh, xitaa canabkiinna, oo jar jeebka ka soo baxa.
Baro wax badan oo ku saabsan sida canab loogu beerayo guga iyo dayrta.
Gooyadu waa inay ahaato mid siman oo siman, waa in lagu sameeyaa xiirto aad u fiiqan.
Waa muhiim! Si aan ugu dhajino sare iyo hoose ee jarista, samee jarjar yar oo yar yar, iyo sare - mid sahlan.
Ku dhaji gooynta dhammaystiran ee 3% xal sulfamer ah illaa 30 ilbiriqsi ka dibna ka bax si hawo u qalaji. Ku duub shubuki qallalan qoyan qoyan ama polyetylen oo ka tag meel qabow (qaboojiyaha, qolof) heerkul ah ilaa 5 ° C.
Guga waxaad bilaabi kartaa tallaal. Waxaa lagu fuliyaa si wanaagsan, laakiin ma aha mid kulul, marka heerkulka hawadu ay dhaaftay 10-15 ° C - bishii Abriil ama May.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo tallaal ah - gabbasho, fiyuusta dhulka hoostiisa ah, oo u kala gooyo jirridda dhulka hoostiisa. Bilawga cusub ayaa lagu talinayaa in ay adeegsadaan habka dambe. Tallaalkan waxaa loo sameeyaa sida soo socota:
Gooynta laga goostay ayaa la gooyaa oo 2-3 maalmood la geliyaa xalka jeermiska (tusaale, "Epin").
Kaydka la soo doortay (gaduudka, halka gooynta la gooyo) ayaa lagu qodayaa 15-20 cm oo laga nadiifiyey xididada xad-dhaafka ah iyo jilif.
Dhexdhexaad ee stem graft waa kala qaybsan yahay qoto dheer ee caarada ee jarida (3-4 cm).
Goynta ayaa la geliyaa kala qaybsanaanta; haddii ay suurtogal tahay (dhumucda jirridda u ogolaato), waxaad geli kartaa jarida kale ee geeska kale.
Foostada si taxadar leh ayaa loogu duubay twin waxaana lagu daboolay dhoobo ama garoonka beerta.
Meesha godadka ayaa lagu daboolay dhulka.
Hadda waxaad u baahan tahay inaad ku dhufatid baadiyaha cusub (waxaad ku dari kartaa ciidda dhulka) iyo biyo. Loosen iyo biyo si joogto ah sida ciidda ku qallajisa agagaarka geedka. 10-14 maalmood ka dib caleemaha cusub waa in ay soo baxaan. Haddii aysan taasi dhicin - waxaad u baahan tahay inaad jarjartid saamiga goobta goobta tallaalka oo ku celi habka.
Si joogta ah u hubi sida ay wax u socdaan, iyo ka saar dhammaan xididada xad-dhaafka ah ee tagay rootstock.
Noocyada daryeelka ee geedo yar yar
Wixii baadiyaha yar yar waxaad u baahan tahay inaad si taxadir leh u daryeelto. Waxay u baahan tahay dabacsanaan iyo jarista haramaha. Ka waraabinta waa lagama maarmaan maadaama dhulku ku qoyan yahay heerka 10 litir oo biyo ah halkii baadiyaha.
Loosinta si taxaddar leh ayaa loo fuliyaa - si aanay u waxyeeleynin xididada.
Waxaa lagu talinayaa in ay katarovka ka dhigi dhirta dhallinyarada sannadka koowaad ama labaad ee koritaanka. Ereygan waxaa loola jeedaa in la gooyo xididdada soo baxa. Sidaa darteed, kicinta horumarinta nidaamka xididka ugu weyn ee la siiyey. Nidaamka waxaa la sameeyaa mar ama laba jeer xilli: marka hore dhammaadka Juun, mar labaad bishii - dhamaadka Julaay ama bilowga Ogost. Si arrintan loo sameeyo, dhulku wuxuu dillaacaa baadiyaha ilaa qoto dheer oo ah 12-15 cm. Mindida fiiqan, dhammaan xididada iyo rootistada ayaa la jaraa.
Sida loo daryeelo canab xagaaga
Dabcan, shaqada ugu badan ee beerta canabka ah ka dib jiilaalka. Laakiin xagaaga ma ogolaan kartid wax walba oo ay qaadanayaan - waxaa jira shaqo ku filan waqtigaas. Marka lagu daro waraabinta iyo xakamaynta, xagaaga waxaad u baahan tahay inaad daryeesho bilowga sameynta cusbooyin cusub, quudin habboon iyo ilaalin.
Qallajinta, samaynta geedka kore, caleemaha caleen
Iyo waxa ugu muhimsan in la daryeelo xagaaga waa goosashada baaxada leh. Iyo si aad u hesho iyada oo la isticmaalayo farsamooyin dhawr ah.
Mid ka mid ah iyaga ayaa xoqan.
Codso caleemaha cagaaran ee noocyada kala duwan ee ubaxa ay ku dhufan karaan ("Joodar", "Pearl Saba", "Garsiga Heerka", "Furmint", "Matyash Janosh", "Riesling").
Nuxurta nidaamka - cuntada waa in loo soo diraa ubaxyada, iyo ma ah in koritaanka a geedka canabka ah cusub. Si arrintan loo sameeyo, usbuuc ka hor canabku way ubaxayaan, dhibicda koritaanka ayaa ka baxda caleemaha yar yar.
Isticmaal muraayadda iyo dhirta. Tan waxaa loo sameeyaa waqti marka koritaanka geedka canabka ah weli waa xoog badan yahay. Waxay ku dhajiyaan dhererka saxda ah (sida caadiga ah garaashka ayaa ka tagay 2 xabbadood), iyo todobaad ka dib ama labo, laba tallaabo oo cusub ayaa bilaabaya inay ka soo baxaan meeshii dhoobada.
Tani waxaa lagu celiyaa inta lagu jiro saddexda sano ee hore ee koritaanka baadiyaha - iyo sanadka saddexaad waxaa jira horaan diyaar u ah duur joog ah.
Caleemaha caleemaha qallalan: video
Saddex ilaa afar toddobaad ka hor goosashada, dhuuban oo jarjar caleemaha. Baakadaha hore ee kori doona ugu hooseeya ee baadiyaha iyo kuwa hooska canabku hoos yimaadaan manjooyin. Manjadu waxay hagaajinaysaa hawada duurka waxayna bixisaa qorraxda si ay u hesho berry, taas oo ka dhigi doonta macaan.
Sida loo quudiyo canabka xagaaga
Xilliga xagaaga, inta lagu jiro ubax iyo Bisaylkiisa dalagga, canab waxay u baahan tahay hab gaar ah oo bacarimis ah Bacriminta. Waqtigaan, waxaad u baahan tahay inaad joojiso Bacriminta nitrogen iyo ka shaqeeyaan kaliya fosfooraska iyo potassium.
Dhamaadka dhammaadka Juun, codso bacriminta adag - tusaale ahaan, azofosku ama nitroammofosku - at heerka of 20 g halkii mitir of beertii canabka ah.
Waa muhiim! Dhammaan qaybaha bacriminta isku dhafan waa inay noqdaan kuwo biyaha lagu dhalaalayo! Haddii kale, xididdada dhirta ma awoodi doonaan inay nuugaan.
Laga soo bilaabo dhammaadka July ilaa bilowgii Agoosto - waqtiga dharka foliar.
Si arrintan loo sameeyo, kala dir 10 litir oo biyo ah:
1 litir oo ash ah;
Sonkorta 15-20 g;
1 g of boron;
1,5 g oo ah naxaas.
Xilliga xagaaga, waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero xaaladda caleenta, sidaa darteed calaamadaha ugu horreeya ee boogta si ay ula dhaqmaan dareeraha Bordeaux ama fungicide (Topaz, Strobe, Quadris ayaa samayn doonta).
Maaddooyinka kale ee wasakheynta
Mararka qaarkood canab waxay u baahan yihiin pollination caan ah. Waa in la sameeyaa laba jeer: markaad ku barbaareysid kala badh iyo buraash buuxa. Shaqada subaxdii, ka dib markii la qallajiyey qoyaan, iyo dhammaadka duhurkii. Haddii aysan jirin qorrax iyo dabayl, waxaad shaqayn kartaa ilaa fiidkii.
Gado qurxin. Ku dhaq biyo karkaraya oo qalalan inta aan shaqada bilaabmin.
Furo fur Marka hore waxaad u baahan tahay inaad biyo raaciso. Puff laga sameeyey dhiciska kabaha jiilaalka ama bakaylaha. Tufulkan waxaa lagu daaweeyaa, la nadiifiyaa, jeermi-dilaa oo lagu qodaa alwaax alwaax ah.
Pollination waxaa loo sameeyaa sidan:
Noocyada ka soo baxa ubaxyada ubaxa bisexual ayaa la gooyay weel diyaarsan.
Calaamadaha manhajka ah ee soo uruuriya lafaha waxaa lagu dabaqaa inflorescences oo loo baahan yahay in la shaqeeyo.
Sidaas awgeed, guga iyo daryeelka xagaaga ayaa guud ahaan aan la isku haleyn, inkastoo ay ku lug leedahay hawlo fara badan - in laga saaro hoyga, kormeerida, jarjarista, ka shaqeynta duurka. Isla mar ahaantaana, waxaad ku beeran kartaa noocyo cusub oo duurka ku yaal horeba. Hawlaha oo idil ee haboon iyo waqti-ku-socoshada dhammaantood waxay hubin doonaan in miro-khudradda beertaada.
Waxaan dooranayaa degaan dhul ah (kiiskeyga, 15-20 cm oo ka soo baxaya shabakadda - silsiladda isku xidhka saddex mitir oo mitir ka xigta xaydaanka). Seedling xiga wuxuu ku jiri doonaa mitir lix iyo toban ah 15 ilaa 15 ilbiriqsi oo ka soo jeeda silsilada yar-yar oo yar! Waxaad u baahan tahay inaad ka tagto mitirka laga bilaabo bogga si loo dayactiro. : 6 mitir u dhexeysa duurka inta badan! Ku filan 2.5 - 3 mitir.
Qodobbadu waa inay gaaraan caarada fossa (ku sii jir). Qalabaynta waa in aysan gaarin qarka fossa by 20-30 cm, waxay bilaabi doontaa inay koraan, iyo dayrta si ay u gooyaan oo buuxiyo daloolka.
Sidee loo dhisi karaa anthurium guriga
Baradhada Bellarosa: midho, qallafsan, abaarta u adkaysata
Cineraria: sifooyinka beerista ee qurxinta daaqada
Noocyo yaryar oo yaryar ayaa had iyo jeer samaynaya yaanyo dhexdhexaad ah ama yaryar, kuwaas oo ku habboon goosashada. Oo ma aha nooc kasta oo sarre leh oo u eg midabyo waaweyn oo waawayn oo cusub. Tamaandhiga "Tamara" waxa loola jeedaa yaanyada oo isku daraya xuruufta baadiyaha iyo cabbirka weyn ee miro. Read More
Dhaqdhaqaaq yaab leh iyo foomka pear kala duwan quruxda Talgar